Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Costa Rica » Costa Rica chọrọ ugbu a ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ gbasara Costa Rica • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Ụlọ ọrụ azụmahịa niile na Costa Rica ga-achọ ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 na mbọ iji chebe ndị obodo na ndị ọbịa, malite na Jenụwarị 8, 2022.
Ndị ọbịa niile, n'agbanyeghị afọ na ọkwa ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, ga-emecharịrị akwụkwọ eletrọnịkị epidemiological HEALTH PASS, opekata mpe awa 72 tupu njem ha.
Ndị etinyere ọgwụ ahụ ga-etinyerịrị “Kaadị ndekọ ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19” n'ụdị ahụ wee nweta koodu QR akọwapụtara nke ha nwere ike iji banye ụlọ ọrụ azụmahịa na mba ahụ.
Site na Disemba 1, 2021 ruo Jenụwarị 7, 2022, a ga-enwe oge mgbanwe ebe ụlọ ọrụ azụmahịa nwere ike ịnabata ndị mmadụ na-enweghị usoro ịgba ọgwụ mgbochi zuru oke, ma ọ bụrụhaala na ha na-arụ ọrụ na ikike 50%.
Malite na Jenụwarị 8, 2022, ụlọ ọrụ azụmahịa niile na Costa Rica ga-achọ ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 na mbọ iji chebe ndị obodo na ndị ọbịa. A ga-enyocharịrị ihe akaebe ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa site na koodu QR ma ọ bụ “kaadị ndekọ ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19,” ma ga-emetụta ndị niile gbara afọ 12 gbagoro. Ụlọ ọrụ azụmahịa gụnyere ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ebe ntụrụndụ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ụlọ mmanya, ọrụ njem nlegharị anya, casinos, ụlọ ahịa, ụlọ ngosi ihe mgbe ochie, mgbatị ahụ, na ụlọ akwụkwọ nkà na ịgba egwu. Ọrụ ndị dị mkpa, dị ka ụlọ ahịa nri na ụlọ ahịa ọgwụ, agaghị achọ ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19.
Site na Disemba 1, 2021 ruo Jenụwarị 7, 2022, a ga-enwe oge mgbanwe ebe ụlọ ọrụ azụmahịa nwere ike ịnabata ndị mmadụ na-enweghị usoro ịgba ọgwụ mgbochi zuru oke, ma ọ bụrụhaala na ha na-arụ ọrụ na ikike 50%. Ụlọ ọrụ na-ahọrọ ịrụ ọrụ na ikike 100% ga-achọrịrị ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19.
Costa RicaIhe ntinye chọrọ ka dị ka ndị a:
Ndị ọbịa niile, n'agbanyeghị afọ ole na ọkwa ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, ga-emecharịrị akwụkwọ elektrọnik epidemiological HEALTH PASS opekata mpe awa iri asaa na abụọ tupu njem ha. Ndị etinyere ọgwụ ahụ ga-etinyerịrị “Kaadị ndekọ ịgba ọgwụ mgbochi COVID-72” n'ụdị ahụ wee nweta koodu QR akọwapụtara nke ha nwere ike iji banye ụlọ ọrụ azụmahịa na mba ahụ.
Ndị ọbịa gbanyere ọgwụ mgbochi zuru oke megide COVID-19 na ụmụaka na-erubeghị afọ 18 nwere ike ịbanye na obodo ahụ na-enweghị amụma mkpuchi njem ruo Jan. n'okpuru afọ 7. Ndị na-enwetabeghị ọgwụ mgbochi zuru oke ga-azụrịrị amụma mkpuchi njem obodo ma ọ bụ nke mba ofesi na-ekpuchi COVID-2022 na mmefu iche iche, ọ bụrụ na ọ dị mkpa.